Tan qaama saalaa dheeressa jettee nama ajjeeste hidhaa woggaa 5’n adabamte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Tan qaama saalaa dheeressa jettee nama ajjeeste hidhaa woggaa 5’n adabamte
Biyya Ameerikatti, jiraattuu naannoo New Jersey kan taate, Kasia Rivera adabbiin woggaa 5 kan itti murtaaye yaalii qaamaa saalaa dargaggeessa gannaa 22 guddisuuf ykn dheeressuuf godhaa turteen milkaayuu dadhabdee mamilli isii harka isiitti du’uu isaatiif.
Woggaa 4 dura ture Justin Street, dargaggeessi umrii 22, gargaarsa Kasia Rivera barbaacha gara isiittii kan qajeele. Kasia’n akka ogeettii qaama saalaa dhiiraa guddisuu/ dheeressuu dandeettuu tokkottii kan ufilaalaa turte. Silaafuu yeroo hunda sobaan hin milkayanii, ogeettiin sobaa Kasia Rivera lilmoo fudhattee qaama saalaa Justin Street dawaa Silicone jedhamu woraante. Dawaan qaama saalaa Justin akka guddisuuf yaadame sarara lakkisee guutummatti kan qajeele gara ujummoo dhiigaatti. Dawichi qaamni Justin hundi hujii akka dhaabu taasise. Guyyaa lamaffaatti, Justin dawaa irra aanuu hin dandeennee, ni boqate.
Kasira Riveran ogummaas ta’ee hayyama nama wol’aanuu tokko hin qabdu ture. Yakka kana raawwachuu isii amanteerti.
Kasia Riveran dhalootaan nama biyya Jameeykaati. Adabbii hidhaa irratti murtaaye yoo xumuratte gara Jameeykaatti kan darbamtu ta’uu isiis manni murtii ifa godheera.
Previous articleFayyadamtoonni Facebook biliyoona 1.5 dhaqqaban
Next articleDhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche